တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. E Jingping ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(နေပြည်တော်)သို့ လာရောက်လေ့လာ – Myanma Gems Enterprise
ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ကျောက်မျက် ရတနာအချောထည်နှင့် ရုပ်တုရုပ်ထွင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်း အချောများ ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်လွှာ တင်သွင်းရန် ကြေညာချက် ( ၁ /၂၀၂၀ )
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့ (၂၇.၈.၂၀၂၀)တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂)မှ ဦးကျော်သီဟ မေးမြန်းသည့် “၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ နည်းဥပဒေ မထွက်ရှိသေးသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေနှင့် အချိန်မည်မျှကြာအောင် ဆက်လက်ရေးဆွဲ မည်ကိုသိရှိလိုခြင်း”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း‌ ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေ၏ ဖြေကြားချက်
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ လှူဒါန်းငွေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဂေဟစနစ် ဖြည့်တင်းရေး စိုက်ခင်း ဧက (၁၀၀) စိုက်ပျိုး
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ချက် အနှစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ မြေစာပုံပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကနဦးအခြေအနေများကို စိစစ်လေ့လာခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၄ / ၂၀၂၀ လုံးခင်း၊ ဖားကန့် ရတနာနယ်မြေအတွင်း မြေပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. E Jingping ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(နေပြည်တော်)သို့ လာရောက်လေ့လာ
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H. E. Mr. E Jingping ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက် (နေပြည်တော်)သို့ (၅.၁၁.၂၀၁၉)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ (၁၄:၀၀)နာရီ အချိန်မှ (၁၅:၂၀)နာရီ အချိန်ထိ လာရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
ဧည့်သည်တော်အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြခန်းမဆောင်အတွင်း ခင်းကျင်းပြသထားသည့်ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မျက်၊ ပုလဲ၊ ငွေထည်နှင့် သယံဇာတပစ္စည်းများ ပြကွက်တို့ကို မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်(နေပြည်တော်)မှ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါသည်။ ဧည့်သည်တော် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရတနာဈေး၊ ရေတံခွန်ပြကွက်နှင့် ဆင်ရေပန်းတို့ကို ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပါသည်။